WordPress အတွက်အကောင်းဆုံးလူမှုမျှဝေခြင်း Button Plugin | Martech Zone
WordPress အတွက်အကောင်းဆုံးလူမှုမျှဝေခြင်း Button Plugin
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 13, 2014 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ Facebook ကွန်ယက်ထဲမှတစ်ယောက်သည် WordPress အတွက်လူမှုရေးဝေမျှခြင်းခလုတ်များမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါ၏ရိုးရှင်းကိုချစ်၏ JetPack ရဲ့လူသိရှင်ကြား ၎င်းကို Automattic ပရိုဂရမ်မာများ (WordPress ၏တီထွင်သူများ) ကတီထွင်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ host setting များသို့မဟုတ်အချို့သော plugin များသည်မျှဝေသော popup ကိုအချည်းနှီးဖြစ်စေသည် (ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) မိုက်ကယ် Stelzner ကြောင်းထွက်ညွှန်ပြဘို့!) ။ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးကွန်ရက်များသို့အကြောင်းအရာများကိုတွန်းပို့ရန် plugin ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်း site ပေါ်တွင်မျှဝေခြင်းခလုတ်များကိုကျွန်ုပ်မသုံးတော့ပါ။
ကျနော်တို့ကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည် Flare plugin ကို အရာအတော်လေးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပလပ်ဂင်ကိုစွန့်ခွာပြီးယခုတွင်၎င်းတို့၏လူမှုရေးဝေစုခလုတ်များကို subscription အဖြစ်ရောင်းချနေသည်။ ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ငါပြissuesနာတွေပိုများလာတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနဲ့ plugin ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ အလွန်ကောင်းသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်မှာကြီးမားသောအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ပို့စ်အတွက်မဆိုရှယ်ယာအားလုံးကိုရနိုင်ပြီးလူများဖတ်ရန်အခြားသူများကိုဆွဲဆောင်ရန် template ၏အခြားနေရာများတွင်၎င်းကိုတင်ရန် code အချို့ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောခလုတ်ဘားနှင့်များစွာသောရွေးချယ်စရာများပါ ၀ င်မည့် WordPress plugin တစ်ခုအတွက်ရှာဖွေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါအများကြီး plugin များနှင့်ထုတ်ကုန်များစွာကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ကခေါ်ဆိုမှု၏ဝယ်ယူမှုအဆုံးသတ်ခဲ့သည် WordPress အတွက်လွယ်ကူသောလူမှုရေးဝေမျှရန်ခလုတ်များ.
ဒီပလပ်အင်သည်မဟုတ်ပါ အလွယ်ကူဆုံး setup လုပ်ရန်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်၊ သို့သော်အတွင်းပိုင်း wizard သည်ရိုးရှင်းပြီးလူမှုရေးလိုက်နာမှုဝစ်ဂျက်များနှင့်အချို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်းများအပါအ ၀ င်အဆင့်မြင့်ရွေးချယ်မှုများပြားစွာရှိသည်။
ဒီပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်၏တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုထည့်ပြီး download လုပ်ပါ WordPress အတွက်လွယ်ကူသောလူမှုရေးဝေမျှရန်ခလုတ်များ ပြီးတော့သင့်စာဖတ်သူတွေကသင့်ကိုမြှင့်တင်ပါစေ။
Tags: facebook ခလုတ်google + button ကိုနှိပ်ပါလူမှုရေးခလုတ်လူမှုရေးခလုတ်ကို wordpress plugin ကိုလူမှုရေးခလုတ်များလူမှုရေးဝေမျှခလုတ်များလွယ်ကူသောလူမှုရေးဝေမျှခလုတ်များအကောင်းဆုံးလူမှုရေးဝေမျှခလုတ်များလူမှုရေးဝေစုမက်ထရစ်လူမှုရေးဝေစု wordpress plugin ကိုtwitter ခလုတ်wordpress plugin ကို
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်မသိသောဝက်ဘ်ဆိုက် itors ည့်သည်များအား ဦး ဆောင်မှုအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်